Shirka tayeeynta hay’adaha dowladda oo lagu qabtay magaalada Muqdisho (SAWIRO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Shirka tayeeynta hay’adaha dowladda oo lagu qabtay magaalada Muqdisho (SAWIRO)
Shir uu soo qaban qaabiyey xafiiska ra’iisul wasaaraha qeybtiisa tayeeynta hay’adaha dowladda ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho, waxaana shirka kasoo qeyb galay dhamaan wasiiradda iyo wakiilo ka kala socday hay’adaha ka fa’iidaysanaya mashruuca tayeeynta hay’adaha dowladda (Capacity Injection Program CIP) oo uu maal-galiyo Bangiga Aduunka.
Ugu horeyntii isku duwaha mashruuca Maxmed Farax ayaa ka warbixiyey heerarka kala duwan ee uu soo maray iyo sida looga fa’iisaydatay mudadii uu jiray iyo mustaqbalka sida looga fa’iidaysan karo.
“Waxaa kulankaan uljeedkiisu yahay inaan la wadaagno hay’adaha ka faa’idaysta mashruuca warbixina kasiino halka uu kasoo bilowday, hadafka laga leeyahay iyo doorka ay ku leeyihiin dhinacyadda kasoo qeyb galay. Waxyaalaha mashruucaan qabanaayo waxaa ka mid ah tayeeynta shaqaalaha iyo awood dhisida hay’daha dowladda ee laf-dhabarka u ah shaqooyinka maalinlaha ah, xoojinta iyo tageeridda dhinacyada asaasiga u ah ka shaqeynsiinta nidaamka dowliga si loogu istaajiyo qaab wax qabad leh oo la wada dhan yahay, lehna isla xisaabtan qeybaha dowladda ee heer federaal” Ayuu yiri Maxamed Faarax.
Wasiiru dowlaha xafiiska ra’iisul wasaaraha XFS mudane Cabdullaahi Xaamud ayaa la hadlay saxaafadda shirka kadib isagoona sheegay in madaama ay dhalatay xukuumad cusub ay lagama maarmaan tahay in xog laga siiyo wasiiradda halka u maraayo iyo qeybaha ay ku leeyihiin mashruucaan.
“Waxaan u mahadcelinayaa hay’adaha dowladda ee kasoo qeybgalay kulanka xog siinta hay’adaha uu khuseeyo mashruucaan, waxaana dowladda kala shaqeeya Bangiga Aduunka, waxaana mashruuca qeybtiisa hore laga hirgaliyey qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka, waxaan u qabanay shirkaan inaan ogaanno meesha u baahan tayeeynta” Ayuu yiri Wasiir Xaamud.
Mashruucaan ayaa waxaa ka fa’iidaysata xafiiska madaxweynaha, xafiiska ra’iisul wasaaraha, wasaaradda maaliyadda, wasaaradda macdanta iyo biyaha, wasaaradda howlaha guud, wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha, wasaaradda beeraha, wasaaradda qorsheeynta qaranka, gudiga shaqaalaha rayidka iyo bangiga dhexe, waxa kale oo mashruucaan ka fa’iidaysta qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka.
Mashruucaan ayaa wuxuu salka ku haayaa isbadalkii dhacay Augst 2012 oo Soomaaliya ay ka gudubtay marxaladii KMG ahayd, waxaana shirkii Brusseles ee 2013-kii la isla qaatay in la hirgaliyo mashaariic ay dowladda Soomaaliya garwadeen ka tahay, waxaana barnaamijkaan laga taakuleyaa sanduuqa loo yaqaan Somali Multi Partner Fund (SMPF), iyadoo deeqdaasna lasoo marsiiyo Bangiga Aduunka.